Arsene Wenger Oo Rajo Wanaag Ka Muujiyay Soo Kabshada Jack Wilshere. - jornalizem
Arsene Wenger Oo Rajo Wanaag Ka Muujiyay Soo Kabshada Jack Wilshere.
Tababaraha kooxda Arsenal ayaa rajo ka qaba in Wilshere uu garoomada tababarka ku soo laabto isbuucyada soo socda, lakiin waxa uu xaqiijiyay in ciyaaryahanka da’da yare e khadka dhexe inuusan ciyaari Karin bisha August.
Wilshere ayaa garoomada ka maqan muddo sannad ah isagoo dhibaato ka qabay canqowga iyo jilibka, waxaana 20 jirkaan uu weli la maqan yahay dhaawacaas ka dib qaliinki ugu danbeeyay ee lagu sameeyay bishii May. Waxaana ay taasi keentay inuu ka haro kooxda Gunners ee booqashada ku mareyga bariga fog.
Wenger ayaa kalsooni ka qaba in ciyaaryahanka reer England uu sameynayo horumar fiican, lakiin weli waxa uu muujinayaa taxadar si dhaawaciisa uusan u noqon mid soo noqnoqda.
“Niyad wanaagsan ayaan ka qabaa xaaladiisa, lakiin sidoo kalena taxadar ayaan muujinayaa sababtoo ah warar niyad xumo ah ayaan ka heli jirnay dhaawaciisa” ayuu Wenger u sheegay suxufiyiinta.
“Qof walba oo ka shaqeeya qeybta caafimaadka ee kooxda waxa uu ii sheegayaa inuu shaqo fiican qabanayo oo uu soo roonaanayo. Weli waxa uu ku jiraa gym. Ciyaaryahan kasta oo gym ku jira bisha July waa hubaal ma ciyaari karo bisha August”.
“Ma doonayo inaan u qabto waqti kama danbeys ah oo uu garoomada ku soo laaban doono sababtoo ah cadaadis badan ayay saareysaa isaga. Lakiin niyad wanaag ayaan ka qabnaa inuu soo laabanayo”.